Uchwepheshe we-Semalt: Izindlela Eziphumelela Kakhulu Ukukhipha Ugaxekile Wokudlulisa Okuvela ku-Google Analytics
Ugaxekile ku-Google Analytics (GA) uphenduka ukuhlushwa kwangempela. Muva nje, abasebenzisi abaningi bangibuza ukuthi bangabhekana kanjani nogaxekile wokudlulisela. Phakathi neminyaka embalwa yakamuva kakhulu, izinto eziyinqaba kakhulu zivele emibikweni yethu ye-Google Analytics futhi akuzona zonke ezingasetshenziswa kuleli phuzu.
UJack Miller, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, ukhumbuza ukuthi ukusetshenziswa kwamashaneli amaningi kanye nokufinyelela kwesiphakeli ku-Google Investigation kungavimbela logaxekile. Ukutholakala kwamalungiselelo aphezulu ngendlela yokwenza kahle kakhulu yokukhipha ugaxekile wokudlulisela phambili kugcizelelwe ohlwini olungezansi:
Yakha igama lakho lehostela
Uma une-rundown yama-hostnames akho onke, udinga ukwenza ukuxhumana okuvamile (REGEX) okubandakanya wonke wabo. Kubalulekile ukuthi uhlanganise wonke ama-hostname akho, noma ingozi yokulahlekelwa ulwazi olusemthethweni.
Yenza isiteshi segama lomsombuluko
Uma izinyathelo ezibalwe ngenhla zenziwa, ungaqiniseka ukuthi isiteshi sizokhululeka kukho konke u-Spantom Spam.
Vakashela ithebhu yoMlawuli, futhi ufinyelele esiteshini oyidingayo ukusebenzisa.
Khetha iziteshi ngaphansi kwesigaba sokubuka, bese ubona ukuthi kufaka phakathi isiteshi
Faka "i-Hostnames esemthethweni"
Esiteshini Uhlobo, khetha Custom
Khetha ngaphezu kokuhlanganisa ama-Hostnames
Ukwenza isiteshi se-Crawler ne-Dialect Ugaxekile ku-Google Analytics
Ugaxekile ogaxekile kunzima ukubona ukuthi usebentisa igama lomninimzi omkhulu, ngakho-ke kudinga isiteshi esinegama elibandakanya bonke abagaxekile abagaxekile. Ukuze ugcine isikhathi esithile, uzosebenzisa i-REGEX ehlongozwayo etholakala ngaphansi kweziqondiso.
Vakashela ithebhu yomlawuli
Kusuka esigabeni sokugcina "VIEW" bona iziteshi bese uchofoza Kuhlanganisa Isiteshi
Faka phakathi "Isiteshi sogaxekile se-Crawler" njengegama
Hlunga Uhlunga, Custom and Bar
Phakamisa Umthombo Wezinsimu Nempi
Abakwa-crawlers abaningana abayena ugaxekile noma abakusizi emibikweni yakho, isibonelo, kulabo abayala ngakho. Laba bots bazovuma irekhodi uma kungavunyelwe kulo mbiko. Ugaxekile okwamanje ususiwe ku-GA wakho awukwazi ukukhishwa isikhathi sonke. Yingakho kubalulekile ukwenza iziteshi ziyeke ukwenza imisebenzi yothwala. Futhi, ungahlanza ulwazi lwakho oludlulile oluthintekile ngogaxekile ngokusebenzisa ukuhlanganiswa kwegama lomnikazi wesibindi.